DEG DEG:Suldaankii Beesha Warsangeli oo iskaga baxay Garowe & Madaxweyne Denni oo wada qorshe cusub
BOSASO(P-TIMES)- Wararka ka imaanaya magaalada Garowe ee caasimada Puntland ayaa sheegaya in uu iskaga baxay magaaladaasi Suldaan Siciid Suldaan C/salaan oo ah Suldaanka guud ee Beesha Warsangeli oo maalmihii ugu dambeeyey uu khilaaf xoogani ka dhaxeeyey madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Denni.
Wararku waxa kale oo ay intaasi kusii darayaan in Suldaan Siciid uu u jihaystay dhanka magaalada Badhan ee gobolka Sanaag oo xarun u ah, waxaana soo baxayaya warar kala duwan oo ku saabsan safarkiisa Badhan.
Xidhiidho kala duwan oo aan la samaynay shakhsiyaad ku dhow dhow Suldaanka ayaa u xaqiijiyey Punlandtimes.com in Suldaan Siciid uu u safray dhanka magaalada Badhan, kadib markii kulamo iyo shirar kala duwan uu kaga qayb galay gudaha magaalada Garowe.
Isimadda dhaqanka gobolka Nugaal qaarkood oo maalmihii lasoo dhaafay dhex dhexaadin kawaday Suldaanka iyo madaxweyne Denni ayaa la sheegay in ay ugu dambeyntii ku guulaysteen in wada hadal ay yeeshaan labada dhinac si xal looga gaadho tabashooyinka jira iyo xurgufta u dhaxaysa.
Suldaan Siciid Suldaan C/salaan oo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Denni goor hore uu ugu baaqay kulankii ay kuwada yeesheen madaxtooyada Garowe waxa ka dhalanka awood ciidan oo uu ku wajaho gudoomiye Dhoobo Daareed ayuu sheegay Mr. Denni in haatan uu arkay dhambaalkii ay xambaarsanayd digniinta Suldaanka, waxaana la sheegay in uu ka raali galiyey wixii ka dhacay Baarlamaanka iyo qaabkii loola dhaqmay Dhoobo hasa yeeshee waxa kulankoodani dambe ay kaga wada hadleen arimo kale oo xasaasi ah oo ku aadan jagada ugu saraysa Baarlamaanka Puntland iyo cida la gayn doono.
Madaxtooyada Puntland ayaa wada qorshe ay ku doonayso in ay uga higto gudoonka Baarlamaanka shakhsi xidhiidh dhow la leh oo taageersan xukuumadda isla markaasna si fudud u meel mariya wax walba oo looga baahdo.
Arintani ayaa kusoo beegmaysa iyadoo maanta shir ka dhacay degmada Xingalool ee gobolka Sanaag uu ka sheegay C/xakiin Maxamed Axmed gudoomiyihii Baarlamaanka Puntland in waxyaabaha lagu riday ay kamid ahaayeen is la xisaabtan uu ka dalbaday hay’adda dowladda iyo madaxtooyada balse taas badalkeeda laga diiday sidoo kale laaluush lagu dayey hasa yeeshee markii uu ka diiday madaxtooyada dalabkaasi xilka laga qaaday.
RIIX HALKAN OO KALA SOCO WARARKII UGU DAMBEEYEY